Ny fihenan'ny vidin'ny angovo azo antoka amin'ny masoandro | Green Renewable
Ny fihenan'ny vidin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro
Ny fiaraha-monina dia manohy miady hevitra momba ny hoe fahendrena ve ny tsy miloka betsaka amin'ny angovo azo havaozina (angovo azo avy amin'ny masoandro, angovo avy amin'ny rivotra ary ankoatry ny hafa). Ny teknolojia angovo dia mahatratra ny governemanta atsasaky ny tany ary eo an-dàlana hamadika an'io adihevitra io ho zavatra lany daty tanteraka izy ireo.
Ny iray amin'ireo olana lehibe na manakana ny angovo azo havaozina sasany dia ny vidin'ny fampiasam-bola voalohany. Na izany aza, araka ny tatitra vaovao iray avy amin'ny GTM Research, ny vidin'ny fametrahana angovo avy amin'ny masoandro dia hitohy hihena hatramin'ny 27% amin'ny 2022. Iran dia nandatsaka ny vidin'ny 4,4% amin'ny salanisa ho 27%.
1 Mihena ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro
2 20 taona izao ny adin'ny angovo
3 Ny herin'ny masoandro dia afaka mifaninana amin'ny olona rehetra
4 Ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro vs ny vidin'ny arina
Mihena ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro
Ny tatitra dia manao vinavina momba ny vidin'ny rafitra photovoltaic solar. Ao anatin'izany dia misy ny fironana mitohy afaka jerena izay manampy amin'ny fihenan'ny vidin'ny tetikasa masoandro. Ireo vidiny ireo dia tsy hampihena ny vidiny noho ny fihenan'ny vidin'ny modules, fa koa amin'ny mpampiasa vola, mpanaraka, ary na ny vidin'ny asa aza.
Ny faritra rehetra afaka misafidy angovo azo havaozina dia hahazo tombony amin'ity fidinan'ny vidiny ity. Ny vidin'ny firaketana farany ambany indrindra dia avy any India, izay nahitana famokarana tsy miovaova ny rafitry ny firenena ary nahatonga ny tolotra nifaninana. Izany dia nahatonga ny vidiny ho ambany sy ambany.
Vaovao tsara ho an'ireo olona rehetra misafidy angovo azo havaozina ho an'ny famokarana herinaratra. Moa ve ity no dingana vaovao hivoatra amin'ny tetezamita angovo mankany amin'ny fanjakan'ny fanavaozana?
Tsara daholo izany, saingy tsy ampy izany. Raha te ho mpilalao manerantany ny angovo avy amin'ny masoandro dia mila izany mahasoa kokoa noho ny loharanom-baovao angovo hafa kely: Amin'izao fotoana izao dia efa, ankoatr'izay, any amin'ny firenena maherin'ny 50, ny angovo avy amin'ny masoandro no angovo mora indrindra amin'ny rehetra.
20 taona izao ny adin'ny angovo
Na dia mijery ny vidin'ny famokarana isaky ny ora kilowatt aza izahay, tsy izany no vidiny mahaliana indrindra amin'ny fananganana zanaka ny angovo azo havaozina. Farafaharatsiny, ao anaty toe-javatra toy ny amin'izao fotoana izao izay tsy ananan'ny fanavaozana vola fanampiana ho an'ny fampiasam-bola.
Ny rafitra angovo misy rafitra goavambe amin'ny fampiasam-bola dia amina taona maro andrasana, na dia am-polotaona maro aza. Izany no iray amin'ireo antony miadana ny fandraisana ny fanavaozana: raha vao natsangana ny orinasa nokleary, gazy, arina (na karazana hafa), dia tsy azo atao ny manidy azy mandra-pahatapitry ny androm-piainany mahasoa. Raha izany dia normal nna haverina ny fampiasam-bola, izay tsy hitranga noho ny lobby lehibe any.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha te handalina amin'ny antsipiriany ny fivoaran'ny tsenan'ny angovo isika, dia tsy maintsy jerentsika hoe ohatrinona ny vidin'ny manomboka ny angovo tsirairay avy amin'ny rangotra. Ny tombom-barotra amin'ny fotoana fohy sy salantsalany dia fotodrafitrasa lehibe amin'ny fanapaha-kevitra farany ataon'ny mpandraharaha sy ny mpanao politika; Na, amin'ny fomba hafa, ny angovo izay mora vidy tokoa hamokarana ary mitaky fampiasam-bola voalohany be dia be dia tsy horaisina mihitsy.
Ny herin'ny masoandro dia afaka mifaninana amin'ny olona rehetra
Araka ny tatitra maromaro avy amin'ny vatana mihoatra ny iray, momba ny indostrian'ny angovo: «Ny herin'ny herinaratra tsy voatsinjara dia manomboka mampandeha arintany sy gazy voajanahary eny an-tsena Ankoatr'izay, ny tetikasa masoandro vaovao any amin'ny tsena vao misondrotra dia ambany noho ny rivotra ny vidiny.
Ary, tokoa, any amin'ny firenena efa ho enimpolo eo ho eo ny salan'isa ilaina amin'ny fametrahana ny masoandro ilaina ny famokarana ny megawatt tsirairay dia efa nidina hatramin'ny $ 1.650.000, ambanin'ny 1.660.000 vidin'ny angovo rivotra.
Araka ny hitantsika amin'ny sary teo aloha, mazava be ny fivoarana. Midika izany fa ireo firenena vao misondrotra, izay amin'ny ankapobeny no firenena manana fiakarana avo indrindra amin'ny famoahana CO2.
Nahita fomba hamokarana herinaratra amin'ny vidin'ny fifaninanana sy amin'ny fomba azo havaozina tanteraka izy ireo.
Ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro vs ny vidin'ny arina
Ity taona ity dia nanaporofo ny hazakazaka angovo avy amin'ny masoandro amin'ny lafiny rehetra, hatramin'ny fivoaran'ny teknolojiaAmin'ireo lavanty ifaninanan'ny orinasa tsy miankina amin'ireo fifanarahana goavambe ho an'ny famatsiana herinaratra, isam-bolana dia misy rakitsoratra napetraka ho an'ny herin'ny masoandro mora vidy indrindra.
Tamin'ny taon-dasa dia nanomboka fifanarahana izy mamokatra herinaratra $ 64 isaky ny MW / ora avy any amin'ny firenena India. Ny fifanarahana vaovao tamin'ny volana aogositra dia nampidina ilay tarehimarika tamina endrika tsy mampino izay mihoatra ny teo $ 29 megawatt fotoana any Silia. Ity vola ity dia dingana lehibe amin'ny vidin'ny herinaratra, satria efa ho a 50% mora kokoa noho ny vidin'ny arintany.
Miaraka amin'ny tatitra Vidin'ny angovo avo lenta (Sarany haavo amin'ny haitao samihafa momba ny angovo, tsy misy fanampiana). Hita fa isan-taona dia azo havaozina mora kokoa izy ireo ary lafo kokoa ny mahazatra.
Ary ny fironana dia mihoatra ny mazava 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny fihenan'ny vidin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro
Eny, nividy takelaka sy batery aho tamin'ny 2015 ary izao dia tadiaviko an-tserasera izy ireo ary mitovy ny vidiny na lafo kokoa. Ilay maodely, marika, fahaiza-manao mitovy ... Ahoana no ahafahana manao izany?
Ny vondrona eropeana dia hanafoana ny hetra amin'ny fanjifana tena
7,7% amin'ny angovo lany fotsiny ao amin'ny Nosy Canary no azo avy amin'ny fanavaozana